Dalxiiska Tel Aviv | Wararka Safarka
Hoteello ka qabso
Bixinta iyo gorgortanka
La safri carruurta
Maxaa la arkaa
Dalxiiska Tel Aviv
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Tel Aviv
Xeebta Mediterranean ee Israel waa magaalada Tel Aviv, kan labaad ee ugu dadka badan wadanka. Tan iyo 2003 waa Dhaxalka Adduunka In kasta oo xaaladda siyaasadeed aysan ahayn tan ugu soo jiidashada badan dalxiiska Israa’iil, runta ayaa ah in tani aysan ka hor istaageynin kumaankun oo dalxiisayaal ah inay yimaadaan sanad walba.
Marka laga soo tago Qudus, Tel Aviv waa magaalo mudan in la booqdo. Taasi waa sababta aan halkan uga tagnay macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan waxa la sameeyo iyo waxa lagu booqdo Tel Aviv.
2 Maxaa lagu booqanayaa Tel Aviv
3 24 saacadood Tel Aviv
4 Tel Aviv getaways
Waxaa la aasaasay bilowgii qarnigii XNUMXaad iyo tarjumida magaceeda oo laga keenay Cibraaniga guga guga. In muddo ah waxay ahayd caasimad, ku meel gaadh ah, waxaana xitaa duqeeyey Masar iyo Ciraaq Dagaalkii ugu dambeeyay ee Gacanka. Meel aan ka fogeyn Qudus, 60 kiiloomitir uun kaliya 90 ka timid Haifa. Waxay leedahay xagaa diiran iyo jiilaal qabow.
Sidaan kor ku sheegay Waa Goobta Dhaxalka Adduunka maadaama ay ka kooban tahay koox aad u xiiso badan oo ka mid ah dhismooyinka dhismaha Bauhaus. Waxaa jira dhismayaal sidan oo kale ah oo adduunka oo dhan ah laakiin meelna kama jiraan sida Tel Aviv oo kale, halkaas oo qaabku ku faafay 30-meeyadii markii ay yimaadeen Yuhuuddii ka soo haajirtay Jarmalka si ay uga badbaadaan dhalashadii Naasiyiinta.
Maxaa lagu booqanayaa Tel Aviv
hay shan xaafadood magaalada: waxa loogu yeero Magaalada Cad, Jaffa, Floretin, Neve Tzedek iyo xeebta. Magaalada Cad waa waaxda ah dhaxalka adduunka oo waxaad kaheleysaa inta udhaxeysa Wadooyinka Allenby iyo Start iyo Wadooyinka Ibnu Gvirol, Wabiga Yarkon iyo Badda Dhexe. Dhammaan dhismooyinka waa cad yihiin, dabcan, waxaana dib loo soo celiyay waqti ka dib.
Waa inaad ku dhex lugeeysaa jidka Rothschild Boulevard, oo ay ku yaalliin qolladaheeda quruxda badan ee ku yaal bartamaha iyo makhaayadaha qabow iyo dukaamada. Sidoo kale wadada Sheinkin Street, oo astaan ​​u ah Tel Aviv, oo leh dukaanno guryo ah, dahablayaal iyo maqaaxiyo. Waa xaafad lama huraan ah.
Diyaarso duulimaad safarkaaga
Sii xajiso HOTEL-ka safarkaaga
SAXIIBADAHA ugu wanaagsan iyo waxqabadyada Isbaanishka
Kireyso CAR safarka
Hel caymiska Safarka oo leh qiimo dhimis 5% ah
Ka xajiso TRANSFER-kaaga garoonka diyaaradaha
Jaffa waa koonfurta Tel Aviv waana kan deked duug ah in waqtiga sii kordhay. Waxay soo jiidasho u leedahay hawadeeda duugga ah, suuqyadeeda boodada, jidadkeeda iyo isku dhafka aan muran lahayn ee dhaqanka Yuhuudda iyo Carabta. Dekeddu sidoo kale waa goob wanaagsan oo leh doomaheeda yar yar iyo makhaayadeeda iyo makhaayadaha iyo suuqyadeeda iyo aragtiyada laga qabo masaafada Tel Aviv.
Floretin Sidoo kale waa dhanka koonfureed waxayna noqon laheyd wax la mid ah Soho gudaha Tel Aviv. Waa xaafad duug ah in kasta oo ay muddo iska beddeshay, haddana wax badan iskama beddelin sidaas darteedna waa gaar. Waa qayb sabool ah waana waajib haddii aad rabto inaad aragto waxyaabo is-khilaafsan. Waad dhex mushaaxi kartaa Suuqa Levinsky, oo leh wax soo saarkiisa Giriigga, Turkiga iyo Roomaaniya, iyo haddii aad habeenkii seexatid waxaa jira baarar jaban dadka badhtamaha ahna inta badan way yimaadaan.
Neve tzedek sidoo kale waa mid ka mid ah degmooyinka ugu da'da weyn Tel Aviv laakiin isla markaa waxay noqotay mid aad moodo oo aad loo soo celiyay. Waxay ka bilaabmatay dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad waxayna ahayd xaafaddii ugu horraysay ee Yuhuudda ee ka baxsan Jaffa. Waxay leedahay wadooyin cidhiidhi ah, dhismayaal badan oo bariga ah, qolalka kala duwan, dukaamo, dukaamo naqshadeeyayaal iyo makhaayado leh barxado hadh leh oo ay mudan tahay in la joojiyo cabitaan.
Ugu dambeyntii, waxaa jira xeebta tel aviv taas oo lagu cadaadiyay maylal ka soo horjeedka xeebta galbeed ee magaalada. Waa mid ka mid ah xeebaha ugu dheer Mediterranean iyo xagaaga gaar ahaan waxaa ku badan dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka oo u yimaada inay ka faa’iideystaan ​​biyaheeda diirran. Inaad aad u ballaadhan tahay qof walba boos ayaa u bannaan. Xitaa xeebta Hilton Hotel waxaa loo yaqaanaa inay tahay xeebta qaniisnimada ee heer sare ah iyo Gordon-Frishman beach waa barta kulanka moodada ah. Sidoo kale waxaa jira Banana Beach, Dolphinarium iyo Alma Beach.
24 saacadood Tel Aviv
Ma waxaad joogtaa Yeruusaalem oo aad dooneysaa inaad u baxsato Tel Aviv? Marka waa inaad naftaada waqti yar qabsato, hore u bax oo ka faa’iideysato. Haddii aad tagto xagaaga waxaad ku qaadan doontaa laba saac xeebta si aad uga bilowdo Jaffa si aad ugu raaxeysato dekedda, quraac ugu sameyso badda agteeda oo aad lugeeysid. Neve Tzedek waa albaabka xiga si aad ugu dari karto safarka oo aad halkaas ugu qadeyso.
Galabtii waxaad kala dooran kartaa inaad ku raaxeysato xeebta ama aad booqato mid ka mid ah kuwa badan Matxafyada ay leedahay Tel Aviv: Matxafka dadka Yuhuudda, Matxafka dhulka Israa’iil, asal ahaan waa matxaf qadiim ah, the Matxafka Bauhaus (iska jir inay furantahay laba maalmood usbuucii, Arbacada iyo Jimcaha) ,, Matxafka Taariikhda ee Tel Aviv, Observatory Azrieli oo aad ka arki karto magaalada iyo 50 kiiloomitir oo xeeb ah, sidoo kale waa bilaash! u heellan shaqsiyaadka muhiimka ah ama farshaxanka.
Habeenkiina magaaladu waxay leedahay a nolol habeen weyn taasi waxay socotaa subaxdii oo dhan. Waad tagi kartaa casho ka dibna waxaad u bixi kartaa qoob-ka-ciyaarka ama baarka maadama meelahaani ay buuxsamaan oo keliya saqda dhexe
Tel Aviv getaways
Haddii aad hal habeen joogi doontid Tel Aviv markaa waad ka faa'iideysan kartaa maalinta labaad inaad sameyso safaro maalinle ah, getaways. Masada aniga ahaan waa safarkii ugu horreeyay ee aan la seegin. Haddii aad ka weyn tahay 40, waxaa laga yaabaa inaad xusuusato Hollywood-kii hore ee loo yaqaan Masada.
Tani waa magaca burburka qalcadda iyo daaraha waaweyn ee lamadegaanka, buur ku taal, oo iska caabbisay weerarkii Roomaanku muddo dheer, aakhirkii naftu ku dhacday oo kuwii ka badbaaday ay geysteen ismiidaamin wadareed, waana sababta loogu tiriyo inay yihiin shahiidiin Sidoo kale waa Dhaxalka Aduunka.
Waxaad booqan kartaa Masada oo aad sameyn kartaa a Safarka Badda Dhimashada isla waqtigaas, tusaale ahaan. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa booqashada Ein Geedi oasis, u soco dalxiis oo u dalxiis tag xeebta Badda Dhimashada ee gaarka loo leeyahay. Ama xitaa, booqo Petra, Urdun deriskeeda ah. In kasta oo dabcan, tan waxaa ku jira safar diyaarad. Adiguna waad awoodaa booqo Caesaea iyo Galili, haddii aad xiisaynaysid kiiska dambe taariikhda Kitaabka Quduuska ah maxaa yeelay socdaalka waxaa ku jira booqasho lagu Naasared.
Ma rabtaa inaad buug qabsato?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Tel Aviv » Dalxiiska Tel Aviv
Ku keydi magacayga, emaylkayga iyo degel-shabakadeena bog-furaha marka xigta ee aan faallo ka bixin doono.
Waxaan rabaa inaan ku helo dalab iyo gorgortan safar iimaylkayga
Waxa lagu booqdo Veracruz, Mexico
Tareenka Zorrilla, qaab ka duwan oo lagu ogaado Valladolid
Ka hel warka emaylkaaga
Ku soo biir Actualidad Viajes free oo aad ku hesho wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dalxiiska iyo safarka emailkaaga.
4 Idinka Hoteellada
Hesho dalabyo iyo gorgortan